'Yaalii fonqochaa fashaleen' booda Sudaanitti jeneraalonni ol-aanoo to'ataman - BBC News Afaan Oromoo
'Yaalii fonqochaa fashaleen' booda Sudaanitti jeneraalonni ol-aanoo to'ataman
Image copyright HAITHAM EL-TABEI
Goodayyaa suuraa Miseensota mana maree humna waraanaa ce'emsaa
Humni waraanaa Sudaan akka jedhetti yaalii mootummaa fonqolchuu humna waraanaan yaalamee fashalaa'een booda qondaaltota waraanaa ol-aanoofi miseensota buleeyyoo kan paartii duraan biyya bulchaa turee Paartii Kongirasii Biyyaalessaa (NCP) to'annoo jala oolcheera.
Yaaliin mootummaa fonqolchuu kun yoom akka ta'e waanti ifa ta'e hin jiru, garuu aanga'oonni kan amma jechaa jiran jalqaba ji'a kanarra raawwate jedhamedha.
Oduun kun kan dhaga'ame yeroo jeneraalonni waraanaa Sudaan biyya bulchaa jiraniifi gareen sochii mormitootaa waliigaltee aangoo waliif qooddachuu isaanii gara xumuraatti fiduudhaaf carraaqaa jiranittidha.
"Uummati Sudaan jaarsummaa Itoophiyaa ni dinqisiifata"
Warra to'annaa jala oolfaman keessaa dura ta'aa ajajaa gurmuu humna nageenyaa, Jeneraal Hashim Mottaalib Ahmed akkasumas, dura ta'aan birgeedii meeshaa waraanaa Jeneral Naasir al-Diin keessatti argamu.
Aanga'oonni biroon to'annaa jala oolfaman biroon ammoo Pirezedaantii Itti-aanaa duraanii Bakrii Hasan Saalihfi Ministira Dhimma Alaa ta'uun Pirezedaantii Omaar al-Bashir jalatti hojjetan turan.
Akka ibsi humni ittisaa kenne jedhutti yaaliin fonqolcha mootummaa akka fashalaa'u ta'e paartii duraan biyya bulchaa ture NCP gara aangootti deebisuuf ture.
Ajajaan Gurmuu Humna Nageenyaa haaraan, Jeneraal Mohaammed Otomaan al-Huseen: "Galmi yaalii fonqocha mootummaa fashalee sun… siyaasa fala argachaa jiru dursanii gufachiisuudhaan hawwii lammileen Sudaan mootummaa siviilii ijaarrachuuf itti jirtu karaarraa maqsuuf."
Walshakkiin cimaan jiraatullee, jeneraalonni waraana, sochiin garee warra mormitootaafi gareen warra finciltootaa haala aangaoo waliin qooddachuu danda'anirratti waliigaluuf yaalaa jiru.
Gama biraan ammoo paartileen mormitootaafi walta'insi gareewwan finciltootaa Sudaan akkaataa mootummaa ce'umsaa gara fuula duraa keessatti hirmaatanirratti waliigaltee mallatteessuu Marsariitiin oduu Sudaan gabaaseera.
Bakka bu'oonni Humnoota Labsii Bilisummaafi Jijjiiramaa (FFC) gurmuu gareewwan Itoophiyaatti argamu Adda Waraaqasa Sudaan (SRF)waliin wal arganiiru.
Akka marsariitiin Baj News jedhamu gabaasetti gareen lamaan "Mootummaa Siviliifi dimokiraatawaa ijaaruuf ," walii galaniiru.
Akka Burqaan Oduu Sudaan kan mootummaan buluu gabaasetti ammoo mariin Mana Maree Humna Waraanaa Ce'umsaafi FFC gidduutti gaggeeffamu Sanbta jalqaba.
Sunan akka jedhetti gareen lamaan marii akkaataa ce'umsi ittiin taasifamurratti xiyyeeffatu ni xumuru.
"Uummati Sudaan jaarsummaa Itoophiyaa ni dinqisiifata" - Ambaasaddar Mohaammud Diriir
Sudaan: Waraanni fi mormitoonni ce'umsa irratti waliigalan
5 Adooleessa 2019
Gamtaan Afriikaa Sudaan sochii gamtichaa keessaa uggure